Atsofohy ao amin'ny HubSpot miaraka amin'ny fampidirana an'i Zeevou ny angon-tsoratry ny vahininao
Integrations » HubSpot
HubSpot & Zeevou fampidirana
Satria ny automatisation ny orinasanao manofa fotoana fohy no tena miahiahy anay, dia te hampiditra fomba iray hafa handefasana ny orinasanao any amin'ny ambaratonga manaraka izahay. Talohan'izay dia tsy afaka nanery fampahalalana ilaina avy tany Zeevou mankany HubSpot ianao. Amin'izao fotoana izao, amin'ny alàlan'ny fampidirantsika amin'i Zapier, afaka mifantoka amin'ny asanao lehibe indrindra ianao satria ny Zapier dia mamindra ny fampahalalana eo anelanelan'ny HubSpot sy Zeevou. Mihoatra ny fandikana vaovao ny onjam-piasan'ny Zapier. Azonao atao ny mijery ny angon-drakitra amin'ireo fitaovana marobe alohan'ny hametrahana azy rehetra ao amin'ny tahiry afovoanao. Ny asa dia azo alamina, nahemotra, fintina ary atao parsed. Ny mombamomba anao dia azo ovaina, omena endrika, voadidy ary voadika raha ilaina izany.
Mangataha DEMO MAIMAIMPOANA
Mitsitsia fotoana amin'ny mandeha ho azy
Alaharo ny vokatrao
Midira mpampiasa vaovao ao amin'ny HubSpot
Mamorona fanentanana CRM & mailaka
misoratra anarana amin'ny HubSpot